How will Small Ethnic Parties Perform in the Upcoming 2020 General Elections?
by Netina Tan and Cassandra Preece
Regardless of the current COVID-19 pandemic, Myanmar appears to be going ahead with general elections in December this year. Will there be continued support for the National League for Democracy (NLD)? Or will ethnic parties gain more popular votes and seat shares this time round?
Election prediction is tricky. In the last 2015 general election, the results surprised many observers and experts, as there was an unexpected ethnic swing support for the NLD. Given the recent trend of party mergers between ethnic parties….will the NLD’s electoral fortune change?
Recent reports indicate that the 2020 elections may be more competitive than expected.
Our paper, “Ethnic Party Success: The Mechanical and Psychological Effects of Plurality Rule in Myanmar” explains the conditions under which ethnic parties can succeed in Myanmar, if they are strategic by fielding candidates in selective districts.
Most conventional studies on electoral and party politics expect small, under-resourced ethnic parties to be decimated overtime. However, we highlight several key factors that could improve the electoral prospects of small, ethnic parties.
It is critical for small ethnic parties not to overstretch their resources but field their best candidates in districts withahigh geographic concentration of voters from the same ethnic group; collaborate with ethnic parties from similar ethnicity to prevent split votes; and also anticipate the voters’ tendency to avoid “wasted vote” syndrome by competing in constituencies with fewer competing parties. We are seeing some encouraging signs of strategic learning in the upcoming election. A number of ethnic parties have merged to improve their competitiveness.
Ethnic voters have also voiced frustration with the ruling NLD’s slowness in dealing with ethnic minority interests. Our paper also identifiesafew underpopulated areas where ethnic parties might haveabetter chance of winning.
If the 2020 election moves forward despite the COVID-19 pandemic, our prediction is that strategic small, ethnic parties such as the newly merged Kachin State People’s Party and Kayah State Democratic Party can still win and gainafew seats and influence the 2020 electoral results.
လာမည့် ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် တိုင်းရင်းသားပါတီငယ်များ ဘယ်လိုပါဝင်ကြမလဲ
ဇွန် ၂၅ ၂၀၂၀ ခုနှစ်။
လက်တလော ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့်ကြားကပင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ကို ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမလား (သို့မဟုတ်) တိုင်းရင်းသားပါတီများက ထောက်ခံမဲ ပိုမိုရရှိပြီး ယခုတခေါက်တွင် လွှတ်တော်အတွင်း အမတ်နေရာ ဝေမျှရရှိနိုင်မလား ဆိုသည်မှာ စဉ်းစားစရာဖြစ်လာသည်။
ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အပေါ် ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခြင်းမှာ အလွန် ခက်ခဲလှပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD အတွက် မျှော်လင့်မထားသည့် တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများ၏ ထောက်ခံမှု အများအပြားရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များမှာ လေ့လာသူများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများကို အံ့သြသင့်စေခဲ့သည်။
လက်တလော တိုင်းရင်းသားပါတီများအကြား ပါတီပူးပေါင်းမှုအလားအလာများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်… NLD ၏ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကံကြမ္မာ ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မလား။
လတ်တလော အစီရင်ခံစာများအရ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် မျှော်လင့်ထားသည့်ထက် ပိုမိုအပြိုင်အဆိုင်များမည့်အကြောင်း ဖော်ပြကြသည်။
မိမိတို့၏ “တိုင်းရင်းသားပါတီအောင်မြင်မှု- မြန်မာနိုင်ငံရှိ မဲအများစုအခြေခံအုပ်ချုပ်မှုပုံစံ၏ ယန္တရားပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ” ဆိုသည် စာတမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တိုင်းရင်းသားပါတီများသည် အကယ်၍ ၎င်းတို့ရွေးချယ်ထားသော မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ကိုယ်စားလှယ်များကို မဟာဗျူဟာကျစွာ နေရချထားနိုင်လျှင် အောင်မြင်မှုရနိုင်သည့် အခြေအနေများအကြောင်းကို ဖော်ပြရှင်းလင်းထားသည်။ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပါတီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ပုံမှန်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ အရင်းအမြစ်နည်းပါးသော တိုင်းရင်းသားပါတီငယ်များသည် အချိန်ကာလတစ်အခုအတွင်း ဖျက်သိမ်း အဆုံးသတ်ရနိုင်ချေရှိကြသည်။ သို့သော်လည်း တိုင်းရင်းသားပါတီငယ်များအတွက် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အလားအလာများ တိုးတက်နိုင်မည့် အရေးပါသည့် အချက်များကို မိမိတို့ အလေးထား မီးမောင်းထိုးဖော်ပြထားသည်။
တိုင်းရင်းသား ပါတီငယ်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့ရှိထားသည့် အရင်းအမြစ်များကို ဝန်အားနှင့်မမျှတစွာ အသုံးချခြင်းမပြုပဲ မိမိတို့လူမျိုးတူမဲဆန္ဒရှင်များရှိရာ ပထဝီအနေအထားအရ အားကောင်းသော မဲဆန္ဒနယ်မြေများတွင် မိမိတို့၏ အကောင်းဆုံး ကိုယ်စားလှယ်များကို နေရာချရန်မှာ အလွန်အရေးကြီးလှသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မဲပြန့်ကျဲမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အလားတူလူမျိုးများမှ တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ “ပယ်မဲ”လုပ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် ပြိုင်ဘက်ပါတီများနည်းသော မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ရွေးချယ်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းအားဖြင့် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ ယိမ်းယိုင်ထောက်ခံမှုကို လက်ဦးမှုရယူခြင်း၊ စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် နည်းဗျူဟာမြောက်စွာ လက်တွေ့သင်ခန်းစာယူနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်း လက္ခဏာများကို မိမိတို့တွေ့မြင်နေရသည်။ တိုင်းရင်းသားပါတီအများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းများကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ပူးပေါင်းမှုများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
တဖက်တွင်လည်း တိုင်းရင်းသားမဲဆန္ဒရှင်များသည်လည်း NLD အစိုးရ၏ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများအရေးလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး နှေးကွေးမှုအပေါ် စိတ်ပျက်သည့် အသံများလည်း ထွက်ပေါ်နေသည်။
မိမိတို့ စာတမ်းသည် တိုင်းရင်းသားပါတီများ ပိုမိုအောင်နိုင်ခြေရှိသည့် လူဦးရေနည်းသည့် ဒေသအချို့ကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
အကယ်၍ ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါရှိနေသည့်ကြားမှ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဆိုလျှင် မိမိတို့၏ ခန့်မှန်းချက်အရ မကြာသေးမီမှ ပူးပေါင်းထားသော Kachin State People’s Party (KSPP)နှင့် Kayah State Democratic Party တို့ ကဲ့သို့သော မဟာဗျူဟာကျသော တိုင်းရင်းသားပါတီငယ်များအနေဖြင့် လွှတ်တော်အမတ်နေရာအချို့ကို ရရှိအောင်နိုင်နိုင်ပြီး ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို တစုံတရာ လွှမ်းမိုးနိုင်ခြေရှိကြောင်းပင်။